Branddị gị dị ka Planet - Onye na-elekọta mmadụ | Martech Zone
Obi tọrọ anyị ụtọ mgbe anyị hụrụ ya Onye ọ bụla na ike iji ndị ọrụ nke gị nyere aka mee ka olu ụlọ ọrụ gị dịkwuo elu mana ọ na-eju anyị anya na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị jụụ. Anyị na-amata na ụfọdụ ndị ọrụ anaghị enwe njikọ, mana mgbe anyị hụrụ retweets di na nwunye na-abịa site na ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ narị ndị ọrụ, anyị na-amalite ịjụ ihe ọzọ nwere ike ịbụ nsogbu.
In The Social Were Were: Olee Great Companies Mee Social Media Ọrụ, Ahịa Ahịa Blue na-aga n'azụ ngosipụta na ọtụtụ ụdị ndị na-eduga-dịka IBM, AT & T, Dell, Adobe, Southwest Airlines, Cisco, Acxiom, na Domo-na-ewepụ mkpuchi ahụ site na akụkọ ihe ịga nke ọma nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke kpaliri ụlọ ọrụ ndị a na 21st narị afọ. Brandsdị ndị a na-egbutu emeela ka ha nwee otu nghọta: ụzọ maka azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya sitere na inye ndị ọrụ mmekọrịta ọrụ ike.
Gaa lelee Onye na-elekọta mmadụ ọdịda peeji nke na jidere a sample isi!